Shiinaha FFP2 wejiga maaskaro oo leh soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha CE ISO FDA | ORIENT
Shan lakab (min gudaha ilaa bannaanka): Cirbadda suufka feeraha ah-Dhar dhalaalay-Irbad suuf ah.
Magaca Badeecada Maaskarada Boorka FFP2
Waxyaabaha: dhar aan tolmo lahayn / Dhar dhalaalay-duuf / sanka clip / suunka maaskaro
Shaqaynta: ay u adeegsadeen xirfadlayaal caafimaad iyo dhakhaatiirta ilkaha ee bay'ada khatarta sare leh
Shan lakab oo ah waji-furka FFP2:
1. Shan lakab (min gudaha ilaa bannaanka): Cirbadda la suray irbadda-Dhar dhalaalaya-Cirbadda feeraha ah
2. Waxtarkayaga shaandhaynta wejiga FFP2 ≥95%, ka wanaagsan taxanaha NIOSH ≥94%
3. Laba nooc: oo leh waalka; waalka aan lahayn
4. Tayada dharka dhalaalaya ayaa go'aaminaya waxtarka miiraha ee maaskaro.
5. Nolosha shelf: 2 sano
Waa maxay wajiyadda FFP2?
FFP2 waxaa loola jeedaa Filter ≥94% bakteeriyada / walxaha waxyeelada leh.
1. Beerta warshadaha:
Waxaa loo isticmaali karaa in lagu farsameeyo cuntada, ka shaqeynta qashinka,
warshad sibidh, farsamaynta dhagaxa, iwm.
2. Nolol maalmeedka:
Waa la isticmaali karaa marka aad qabato qaar ka mid ah mashaariicda Do-It-Yourself, oo aad sameyso shaqooyinka wasakhda ah, jeermiska gurigaaga oo aad iska ilaaliso PM2.5.
a. Haddii maaskaro wajiga FFP2 leeyahay kayd, gaarsiinta waxay noqon doontaa 1-2 maalmood;
b. Haddii la soo saaro maaskaro cusub oo FFP2 ah, gaarsiinta waxay noqon doontaa 20 maalmood.
Su'aalaha la Weydiiyo ee FFP2 maaskaro wajiga:
S: Sidee loo soomaa amarka?
J: Noo sheeg E-maylka (Aqoonsi, shirkad, macluumaad), iyo mobilkaaga MAYA.
J: ORIENTMED waa soo saare + ganacsi ku takhasusay soo saarida qalab caafimaad oo la isticmaali karo iyo ilaalin shaqsiyeed. Waxaan xaq u leenahay dhoofinta sidoo kale.
S: Sideen ku heli karaa qiimaha gaarka ah ee alaabta aan doonayo?
J: Qiimahayagu wuxuu ku saleysan yahay sheyga sheyga, maaddada, tirada, cabirka, xirmooyinka iyo shuruudaha ganacsiga. Kaliya baaritaan kahor intaadan dalban.
J: Haddii aan haysanno keyd, waxaan ku soo diri doonnaa laba maalmood gudahood ka dib marka aan helno lacagtaada iyo xamuulkaaga. Waqtiga diristu waxay kuxirantahay tirada dalabka iyo awooda wax soo saar.
S: Sidee baa alaabta la iigu soo dirayaa?
J: Tijaabooyinka iyo badeecooyinka yar yar ee dufcadda ah, badeecadaha waxaa diraya DHL, UPS, FedEx iyo TNT. Soo saar ballaaran, waxaa lagu diri karaa gaadiidka cirka iyo maraakiibta.
Hore: Dharka go'doominta PE ee la iska tuuri karo
Xiga: Xirmada muunad qaadista fayraska ORIENTMED